မိုးကောင်းကင်: အရေးကြီးတဲ့ ဖိုဒါလေးတွေကို ၀ှက်ထားမယ်။
မိမိသုံးနေသောအရေး ကြီးသော ဖိုင်တွေ ဖိုဒါတွေ တခြားသူတွေ မသိအောင် မတွေ့အောင် မိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် Memory Stick တွေထဲမှာ သိမ်းတဲ့ အခါမှာ.. ဘယ်သူမှ မမြင်နိုင်အောင် သိမ်းထား ( ၀ှက်ထား) နိုင်ပါတယ်။ဘယ်လို သိမ်း (၀ှက်) မလဲ ဆိုတော့ .
၁။ ကိုယ်သိမ်း(၀ှက်)မယ့် ဖိုဒါ ကို. ဘယ်နားမှာ ၀ှက်မလဲ ဆိုတဲ့ နေရာကိုရွေးပြီးတော့ အရင်ထည့်ထားခဲ့လိုက်ပါ။ ဥပမာ.. Desktop ပေါ်လား၊ My Document ထဲလား၊ D: ထဲလား E: (Memory Stick ) ထဲလား ပေ့ါ။
၂။ Run ထဲမှာ cmd လို့ ရိုက်ပြီး OK ပေးလိုက်ပါ။
C:\_Documents and Settings\_admin>_ ဒီအတိုင်း ရှိနေရင်..
၃။ ပြီးတော့ စောစောက ကိုယ်ထည့်ထားခဲ့တဲ့ အောက်ကို ရောက်အောင်သွားလိုက်ပါ။ ကိုယ်က D: ထဲမှာ ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်. .
C:\_Documents and Settings\_admin>D: လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ရင်..
D:\_>_ လိုလေး ဖြစ်သွားမှာပါ။ .. စ၀ှက်တော့မယ်နော်.. ၀ှက်မယ့် ဖိုင်နာမည်ကို. koko လို့ ပေးခဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်..
D:\_>attrib +s +h "koko" လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
D: ထဲမှာ ကြည့်ပြီးတော့ လုပ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့် ရဲ့ ဖိုဒါလေး မျက်စိအောက်က ပျောက်သွားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ( attrib +s +h "koko" ဒီနေရာတွေမှာ space လေးတွေတော့ ခြားထားခဲ့အုံးနော်)
Folder Option ထဲက View ထဲက
Show Hidden File and Folder လုပ်ထားလဲ ဖိုဒါ မှိန်မှိန်လေး အနေနဲ့ တွေ့မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီလို သိမ်းတဲ့အခါမှာ. ကိုယ်သိမ်းတဲ့ Folder Name ကိုတော့ ကိုယ်မှတ်မိဖို့ တော့ လိုတယ်နော်.. တကယ်လို့. နာမည် မေ့သွားရင်လည်း. ပြန်ရှာတဲ့ နည်းတော့ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်သိမ်းခဲ့တဲ့ နေရာ တော့ သိဖို့လိုတာပေါ့နော်.. အဲဒီလိုသိတယ် ဆိုရင်. ဘာနဲ့ သွားကြည့်မလဲ ဆိုတော့.
WinRar ဆိုတဲ့ software လေးတော့ ထည့်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်.. WinRar ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ်သိမ်းထားတဲံ့အောက်ကို သွားကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ.. ၀ှက်ထားတဲ့ ဖိုင်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်... အဲဒီကနေ ဖွင့်ရင်လည်း ရတော့ရပါတယ်. D: ထဲမှာ ပြန်မြင်ရအောင်တော့လုပ်လို့ မရဘူး လို့ ထင်တာပါပဲ။
စောစောက ၀ှက်ထားတဲ့ ဖိုဒါ ကို ပြန်ဖော် ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့.. စောစောက..လိုပဲ. ကိုယ်ဝှက်ထားတဲ့ ထဲ ရောက်အောင်သွားပြီးတော့.. အပေါင်း နေရာ မှာ အနှုတ် ကလေး နဲ့ ဖော်လိုက်ယုံပါပဲဗျာ..
D:\_>attrib -s -h "koko"
ဒါဆို ရင်တော့ အိုကေသွားပါပြီ။
*** Memory Stick တွေထဲမှာလည်း ဗိုင်းရပ် ကိုက်လို့ ဖိုဒါတွေ ရှာမတွေ့တော့ဘူး ဆိုရင်တော့.. WinRar နဲ့ အရင် ဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ အပေါ်က နည်းလေး အတိုင်း ပဲ ပြန်လည် ဖော်ယူလို့ ရပါတယ် ခင်ဗျာ။..
ကျွန်တော်တို့ ဖိုဒါကို ကုတ်တွေထည့်ပြီး rename ပေးဖျောက်မယ်ဆိုရင် refresh လုပ်တဲ့ အခါ မှာ အဲဒီဖိုဒါနေရာကို ပြနေပါလိမ့်မယ်...။
ဒါကြောင့် ဖိုဒါရှိနေတယ် မရှိနေဘူးဆိုတာကိုသိပါတယ်...။ ။
အဲဒီနေရာကလည်း လွတ်နေပါလိမ့်မယ်...... ။ ဖိုဒါရှိနေတာ သိနေရင် အဲဒီနေရာ မှာ နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ရင် ပွင့်သွားပါတယ်။ ပြီးတာ့ ဖြတ်ပြစ်လို့လဲ ရပါတယ်။ အဲဒါက သိပ်စိတ်မချရဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
ဖိုဒါကို rename ပေးပြီးတော့ alt+0160 လို့ ရိုက်လိုက်ရင်.ဖိုဒါလေးပဲ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ နာမည်မတွေ့တော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ အဲဒီ ဖိုဒါမှာ right click နှိပ်ပြီး properties >customize> change icon ထဲမှာ ပုံလေးတွေကြားထဲက ဘာမှ မမြင် ရတဲ့နေရာ.. ကွက်လပ်လေး ပေါ်မှာ မောက်စ် လေး တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်.. အပြာရောင် အကွက်လေး တွေ့ရပါလိမ့်မယ်. အဲဒါဆိုရင်.. ok..Apply .. Ok ပေးလိုက်ပါ......။ ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်.....။ အဲဒီနေရာလေးက တော ကွက်လပ်လေး အနေနဲ့ တော့ ရှိနေမှာပါ.............
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 9:49 PM
english, adalat, >:]], purchase generic advair diskus online, mts, cheapest generic abilify online, 29669, aggrenox best price, 8-((, allegra online buy, paqjdg, albendazole drugs, 2039, albuterol tablets, %[, adoxa pills, 3184, actos online order, rue, order generic aleve, 674, buy alesse without prescription , %-],
unated states, cheapest generic aciphex online, ktkv, order allegra online, 8PP, abilify pills, %-P, cheap aciphex, vid, alesse cheap, kna, albuterol online buy, :-)), order generic albuterol sulfate online, %P, online abilify buy, ggqn, cheap albendazole online, eujr, albendazole shop, wnbjl, online albuterol buy, :]]], cheap aggrenox, isws, accutane online order, %D, buy generic altace, mvis,
unated states, albuterol sulfate, wkm, purchase albuterol sulfate without prescription , qzgl, albendazole online buy, >:P, cheapest albuterol sulfate online, pkveg, purchase albendazole online, kbbmio, cheap allopurinol, =-], albendazole no prescription, 8]], online allopurinol buy, 3057, albendazole buy, %-P, cheapest generic actos, >:-]]], albuterol order, obuqig, aggrenox, >:P, accutane online, %-], albendazole no prescription, :-[, buy generic allegra-d, =-[[[, purchase accutane online, :-], alesse pills, 4691, advair diskus purchase, eiu, alesse no prescription, 8), albendazole online order, zcge, buy generic alesse, :)), buy generic abilify online, 5351, cheapest accupril online, 181, altace buy, hwe, generic albuterol sulfate without prescription , 00463, buy allegra-d, 189, generic abilify without prescription , 8(((,
unated states, order alesse online, selrpy, order allopurinol online, mmjbky, acetazolamide online, 78516, purchase generic altace online, %-]], albendazole online buy, 83637, aciphex online order, vxi, generic aggrenox, %P, accupril shop, 870978, aleve pills, %-DDD, buy generic alesse online, zut, cheapest generic albuterol, 011, purchase generic aleve online, 92360, price accutane, 437222,
usa, allopurinol low cost, 5279, low cost allegra-d, lpvry, buy alesse online, >:-PPP, generic albuterol sulfate without prescription , 8]]], purchase aldactone, iyo, buy accutane, lnvfzs, allopurinol pills, aymsmy, allopurinol shop, 738, cheapest allopurinol online, 8)), buy albuterol sulfate, 1089, albuterol sulfate, %-), purchase aldactone, :-]], generic accupril online, 924, allopurinol online buy, gba, cheap generic allegra, %-PPP, aleve without prescription , 5471, actonel pills, 460679, acyclovir buy, %-(, price aldactone, >:-]], albuterol order, 458360, purchase generic aleve online, =-[, buy albuterol sulfate online, detcr, albuterol sulfate, zvx, price acetazolamide, 39940, purchase albuterol online, trpomm, aggrenox purchase, >:-[, cheapest accupril, flznet, albendazole purchase, 0517,
us tx dallas, acetazolamide purchase, =OOO, order advair diskus, yji, acyclovir purchase, cxpop, order allegra-d without prescription , 134339, buy generic albuterol online, 95360, aggrenox purchase, lgw, altace buy, gjqf, aleve price, sxe, actonel online buy, gzmo, allopurinol online, 8O, albuterol sulfate low cost, yfqmd, generic alesse without prescription , =-O, albendazole best price, %-), allegra-d tablets, gkx, order actos, 6478,
usa, purchase generic aldactone, euxa, cheap alesse, rfni, abilify without prescription , 9465, accutane best price, cdl, actos tablets, 8PP, actos pills, 528832,
unated states, generic aldactone online, 8-OOO, cheapest allegra-d online, kdt, order albendazole online, =PPP, order generic adalat, 5370, purchase abilify, 491960, buy allegra-d online, 8-(((, accutane pills, 8-)), purchase generic advair diskus online, 9969, order allegra-d, 8-]]], purchase accutane online, iyuvdt, generic abilify online, raq, price adoxa, ypew, adalat shop, 038358, cheap generic allegra, =-]]], order generic alesse, 3403, advair diskus drugs, fcltn, generic altace online, >:DD, altace buy, onzf, allopurinol drugs, qdd, purchase generic aleve online, =], order generic albuterol, 8[[, cheap albendazole online, 8-[[, cheap alesse, sdkgt, purchase accupril without prescription , 8[[,
us tx dallas, order generic aleve online, :-OOO, order albuterol sulfate without prescription , 603642, adalat online order, pwje, generic aldactone without prescription , 954227, allegra-d shop, %DDD, purchase generic actonel online, =]], cheapest generic actos online, 8-(, cheap generic actonel online, sbresj, cheapest aggrenox online, 204902, cheapest altace, >:(, price albuterol sulfate, 643360, allopurinol no prescription, 601606, buy generic aleve online, nmwgo, aleve order, 1473, accupril order, lrbb, altace online order, 902, order albuterol, aqtdf, adoxa tablets, >:OOO, accutane, nqom,